Xafiiska WPS Xafiiska Alpha 15 ayaa lagu heli karaa xoogaa isbeddel ah | Laga soo bilaabo Linux
WPS Office Alpha 15 ayaa la heli karaa iyadoo waxoogaa isbeddel ah lagu jiro
Kingsoft Office Alpha 15 hadda waa la heli karaa hadda waxaa loo bixiyay WPS Office Alpha 15. Shirkadda Shiinaha ayaa go'aansatay inay isticmaasho magaca asalka ah ee badeecada iyo shirkadda reer Galbeedka
1 Maxaa ku cusub xafiiska WPS Office Alpha 15:
2 Xafiiska WPS Xafiiska Alpha 15 Soo Degso:
Maxaa ku cusub xafiiska WPS Office Alpha 15:
Qoraaga WPS wuxuu keenaa taageero xaddidaadda tafatirka.
Qoraha WPS hadda wuu soo celin karaa booskiisii ​​u dambeeyay ee edbinta markii aad dib u furto dukumentiga.
Qoraaga WPS wuxuu taageeraa daaqad kala jaban si akhris fudud loogu akhriyo.
Qoraaga WPS wuxuu taageeraa qaabka qoraalka adag.
Waraaqaha WPS waxay hadda taageertaa wadaagista buugaagta shaqada.
Warqadaha loo yaqaan 'WPS Spreadsheets' waxay hada bixiyaan talooyin marka la qorayo hawl.
Waraaqaha WPS waxay taageertaa raadinta qaabaysan / beddel.
Waraaqaha WPS waxay hadda taageertaa baaritaanka khaladaadka qaaciddada.
Shirkaddu waxay dhibaato ku qabtaa maktabadaha Embarcadero Delphi oo ay u adeegsato barnaamijkeeda. Koodhka ay ku qoran yihiin maktabadahaani waxaa kaliya oo loo heli karaa Windows sidaa darteed waa in loo waafajiyaa GNU / Linux iyo Mac OS. Tani waqti ayey qaadan doontaa.
Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso warbixinta soo socota Roger Luedecke.Warbixinta waxaa qoray Roger luedecke , wuxuu noo sheegayaa wax ku saabsan taageerada ay Canonical siiso WPS Office si loogu beddelo Microsoft Office ee OEM
Xafiiska WPS Xafiiska Alpha 15 Soo Degso:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » WPS Office Alpha 15 ayaa la heli karaa iyadoo waxoogaa isbeddel ah lagu jiro
78 faallooyin, ka tag taada
Anigu waxaan ka mid ahay kuwa u adeegsada Xafiiska WPS inay ku abuuraan dukumiinti. Waxay u shaqeysaa sifiican, waxaan dhihi lahaa way kafiican tahay Libreoffice. Waxaan jeclaan lahaa in lagu daro qaab ahaan ugu caansan ros
Maahan software bilaash ah waxayna ka timid shirkad shiineys ah, waxay la mid noqon laheyd hadii Linux ay xbox gareyso dhamaan xD qeybinta, waxay ku xirnaan laheyd xaaladaha shirkada. fiican hoos iyo hadda
Su’aal. Waa maxay liisanka aad isticmaasho WPS?
Iyo maxay ku kala duwan yihiin marka laga reebo muuqaalka Candy M $ marka loo eego Libre-Office?
waa 99% la jaanqaadi kara xafiiska wax badan oo ka badan libreoffice
Haa, taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha aan u aaneeyo LibreOffice, sida faylasha M $ Office u sameyso kubad.
Laakiin haye, kuwa ka baxsan heerka waa iyaga.
Liisanka ayaa leh
Siduu daryo yidhi, waa 99% xafiis iswaafajin kara.
Waxay leedahay laba is-dhexgal oo muuqaal ah, midka soo-jireenka ah sida Office 2003 iyo Office 2013 UI.
Waxay kaloo keentaa hawlo ka badan kuwa LibreOffice.
Iskuxirku wuu kafiican yahay maxaa yeelay waxaa lagu sameeyaa Qt.
Iskuxirka LibreOffice wuxuu adeegsadaa maktabad guri lagu sameeyo oo lagu magacaabo maktabadaha VCL oo aan lahayn
ku xidhan Qt ama Gtk.
Si kastaba ha noqotee markii ugu horraysay kuma timaaddo afkeenna, sidaa darteed maahan wax kale
Ma ahan wax beddel u ah kuwa aan aqrin Ingiriisiga, laakiin in badan oo naga mid ah ayaa ah.
Ku jawaab oscarx
Aan aragno haddii ay sii daayaan nooc 64-bit ah iyo Isbaanish ...
Uma arko wax macno ah dalabkaaga, xitaa heer sare, ma cuno 3 gig oo wan ah kiiskii ugu xumaa, maxaa yeelay waxay ku dhacdaa naxariis darada safafka-safafka ah, marka la adeegsanayo marin u helida, oo ay la socdaan lamaane oo ka mid ah malaayiin saf - kolonyadu ma gaaraan 3GB wan ... hadda, haddii aad isticmaasho heer sare 64bit waxaad leedahay dhibaatooyin iswaafajin ah oo leh dhowr "barnaamijyo" barnaamijyo iyo codsiyo horey loogu dhisay muuqaal aasaasi ah, iyadoo la adeegsanayo 32 qaybood
Haddii aan macno u yeesho, 10 jajab ayaa jiray 64 sano, macno malahan in lagu rakibo deegaan nadiif ah oo 64-bit ah, xirmooyinka 150 si loo rakibo 32-bit codsiyada
PS: xisaabinta jadwalka miisaska ... 64 gogo 'ayaa ka dhaqso badan ..
Waan kugu raacsanahay adiga, @ x11tete11x, maadaama oo aan la shaqeynayo 64-bit ay si weyn u wanaajineyso waxqabadka PC (Waxaan xaqiijiyey markii la isticmaalayo Windows 8 32-bit oo leh Debian Wheezy 64-bit, runtuna waxay tahay in netbook-kayga uu igu sii dheeraaday) oo leh Debian 64-bit).
Xiiso leh, xaaladdayda wps-office 32 qaybood ayaa ka dhakhso badan xafiiska libre ee 64-bit.
Horumarinta Xafiiska WPS waxay ka shaqeynayaan WPS Office 64 bit oo loogu talagalay Linux.
xafiiska wps 64 wax yar (sawir)
Waan rakibi doonaa si aan u tijaabiyo, waxay u egtahay mid fudud
Waxaan ku rakibay buuggeyga netka, runtuna waxay tahay inay si habsami leh u socoto.
PS: Waan booqanayaa
Elio waa dhif in Muy Linux aysan ku dhaafin warkan. Waxay ila tahay Muy Linux kaliya inuu dhiiri galiyo LibreOffice sidee u aragtaa?
Kuuma sheegi karo, laakiin MuyLinux ma arkin xagjir dhankaas ah. Malaha @metalbyte waqti uma helin inuu ku faafiyo.
No odt, xaflad ma leh dijo
Maya gabi ahaanba, Linux aad ayaa u dhiirrigelisa softiweeriyada lahaanshaha wax badan, ama miyaadan arag waxyaabaha gaarka u ah ciyaaraha, tusaale ahaan?
Jawaab No odt, xisbi maleh
Ogsoonow waxa aad ka hadlayso, maxaa yeelay si sax ah halkan software-ka lahaanshaha ayaa loo dalacsiiyaa si la mid ah sida looga hadlo software-ka bilaashka ah, sidaas darteed aasaaskaagu waa mid demagogic ah.
Arrin kale: dhibaatada ka jirta LibreOffice ayaa ah inaysan si sax ah u soo bandhigi karin faylasha OOXML sababo la xiriira sahlanaanta musuqmaasuqa markay tafatirkayaan dukumiintiyada aan lagu sameyn ama aan lagu tifaftireynin xafiiska Microsoft Office (waa wax ay WPS ku guuleysatay inay ka adkaato Xafiiska).
Adoo jidka ag jooga, ma ogtahay in laptop-ka Leemote horeyba loogu heli jiray iibka Latin Amerika?
Miyaanay ahayn degelkan barnaamij bilaash ah?
Yuu yidhi? Hal ku dhiggeennu waa Aynu u adeegsanno Linux si aan lacag la'aan u ahaano.. oo maahan, Aynu adeegsanno Linux maxaa yeelay waxaan nahay Taliban oo waxaan isticmaalnaa oo keliya Software Free... iyo xorriyadda xitaa waxay ku jirtaa suurtagalnimada doorashada haddii aan rabno inaan ku isticmaalno software furan ama xiran GNU / Linux 😉
Nasiib darrose, xitaa gudaha softiweer bilaash ah, waxaad badanaa maqashaa weedhaas oo ah inay iskeed isu buriso, waxay u baahan tahay oo keliya akhriska iyadoo fiiro gaar ah loo leeyahay. Waxaan ula jeedaa 'xor ahaanshuhu waxay ka dhigan tahay awood u lahaanshaha xulashada isticmaalka software-ka lahaanshaha'. Kulliyaddu inay go'aansato inay isku xirnaato kuma soo beegmayo qeexitaankeyga 'xorriyadda'. Sikastaba xaalku ha ahaadee, degel u heellan faafinta software-ka bilaashka ah waa inuu faafiyo qiimayaasha sii waaraya, haddii uu jiro badeecad ka roon tan beddelka xorta ah, waa inuu sameeyaa wax kasta oo suurtagal ah si dadka isticmaala ay u dalbadaan in la sii daayo ama loo dhigo dadaal loogu jiro hagaajinta beddelaadyada lacag la’aanta ah.
Waxaan tijaabiyey xafiiska WPS muddo dhowr bilood ah, runtiina waxay umuuqatay mid aad ufudud iyo fudeyd badan marka loo eego libreffice / openoffice, uma helin inaan tijaabiyo sida ay ugufiican tahay maaraynta faylalka xafiiska M $.
Sikastaba, ilaa laga siidaayo, Libreoffice runti sifiican ayuu ushaqeeyaa markastana dhaafto waqtiga sifiican ayuu ushaqeeyaa.
Jawaab u fur
Waa hagaag saaxiib, laga yaabee qeexitaankaaga xorriyadda inuu aniga xoogaa iga adag yahay, waxaanan tixgelinayaa haddii aan doonayo inaan isku xidho naftayda, inay noqoto, ama inaan helo xorriyadda iyo xaqa aan ku leeyahay. Waxaan isticmaalaayay GNU / Linux sanado badan waligay kamana mid noqon munaafiqiinta sheeganaysa inay wax walba jeclaadaan bilaash oo ay isticmaalaan koodhadh maqal iyo muuqaal leh, tusaale ahaan. Had iyo jeer waan dhahay, haddii aan u baahdo wax xiran, laakiin shaqeynaya, si fiican ayaan u isticmaalaa. Ugu dambeyntiina, anigu kama mid ahay kuwa qaata koodhka isha ee wax walba oo dhex mara. WPS Office waa Office Suite aad ufiican, waxaan kuwada rakibey LibreOffice mid walbana waxaan u isticmaalaa hadba baahida aan u qabo, hadii aan runta sheegona waa qurux badan tahay oo sifiican ayey u shaqeysaa aniga dan kama lihi hadii ay lacag la’aan tahay ama maya.
Mid ka mid ah waa in la isticmaalo softiweer xiran, laakiin taasi waxay u oggolaaneysaa isticmaalkeeda iyada oo aan la bixin (Opera, Chrome, WPS Office ... iwm), iyo mid kale oo la jabiyo oo loo isticmaalo nambarada taxanaha ah. Taasi waa dambi. Xilligan la joogo ma xasuusto qoraal kasta oo ka yimid FromLinux oo dhiirrigeliya budhcad-badeednimada ama adeegsiga Software-ka iyada oo loo marayo dildilaaca iyo silsiladaha, sidaa darteed, waxaan u malaynayaa in aan baahinno oo keliya wixii lagama maarmaanka ah .. Way khaldami kartaa, ma dhici karto, laakiin waxaad tahay BILAASH inaad ka fikirto waxaad ka rabto. 😉
Maahan inaad Taliban tahay iyo in kale. By the way, waa wax aad iiga xumaado inaan maqlo ereyga "Taliban" oo sii kordheysa sheeganaya mowqif aad u adag oo ku saabsan waxa aan ka aaminsanahay ee ku saabsan software-ka. Xaqiiqdii, waxaan u arkaa wax badan oo aan loo dulqaadan karin in la waco qof kasta oo ka adag adegsiga adeegsiga barnaamijyada bilaashka ah ee Taalibaan intii aan sidaas noqon lahaa.
Dhinaca kale, waxa la tilmaamay waxay la xidhiidhaan rajooyinka laga soo saaro akhristayaasha baloogyada, maxaa yeelay haddii aynaan u malaynaynin inay jiraan, markaa akhristayaasha waxaan ka fili karnaa in maalmahan midkood ay jiri doonaan qoraalo dhiirrigeliya barnaamijyo sida tusaale ahaan Microsoft Office ama Adobe Photoshop. Xaaladdaas markay tahay, waa maxay desdelinux, degel wax ka qabata guud ahaan barnaamijyada software-ka?
Waxaas oo dhan waxaan ku tilmaamayaa aniga oo aan dhib lahayn, kaliya si aan u muujiyo dhinac ay u muuqato inay muhiim tahay in la hagaajiyo
Waan ka xumahay, Leo, laakiin aniga ereyga "Taalibaan" ama "xamaasad" ayaa ka hooseysa dabeecadda dadka qaarkiis, in kasta oo aanan marnaba ku tusin inaad ka mid tahay. In xukunkaaga, waxyaabaha aad rumeysan tahay, ama wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeerto barnaamijka ay kaa hor istaagto inaad isticmaasho xafiiska WPS ama barnaamijyo la mid ah, xaqiiqda fudud ee ah inaadan aheyn Source Furan, waan fahamsanahay oo xitaa waa mudan tahay in la ixtiraamo, laakiin mararka qaarkood xagjirnadu waxay yihiin xun.
Aniga aragtidayda la xiriirta arintaan waxaan si cad ugu cadeeyay jawaabtayda furitaanka (taas oo micnaheedu ahayn inay tahay aragtida iyo ujeedada DesdeLinux), hadana waan ku celinayaa, ma xasuusto inaan ku arkay hal qoraal oo ku saabsan balooggan si toos ah ama waxay si dadban u taageertaa Software-ka lahaanshaha. Laakiin xaqiiqadu waa mid kaliya, waxaa jira dad leh Software Bilaash ah oo aan waxba qaban karin, maxaa yeelay qofkasta oo ii sheega inay doorbidaan inay isticmaalaan dareewalada bilaashka ah kaarka NVidia ama ATI, in kasta oo ay u muuqato inay aad uga xun tahay darawalada lahaanshaha, waxaan u sheegayaa taasi waa beenaale munaafaq ah oo sumcad weyn leh ama kiiskii ugu dambeeyay, masochist. Laakiin ka warran haddii ay weli run ahaan lahayd, waa go'aan shaqsiyeed oo aysan ahayn in qof walbaa uu taageero.
Waxaan ku waydiiyay, ma isticmaashaa kumbuyuutaro maqal iyo muuqaal gabi ahaanba bilaash ah? Muusikadaada oo dhami ma ku jirtaa .ogg? Iyo qaabkee ayaa fiidiyowyadaadu yihiin? Runtii ma adeegsanaysid ilo xidhan? Haddii aad i tustid in kombiyuutarkaagu 100% xor yahay (taas oo aan shaki ka qabo, maxaa yeelay qalabkeeda waa inuusan noqon mid furan) markaa wada hadalkan waan iska indha tiri karaa.
Sida Elav uu leeyahay, in la doorto barnaamijka softiweerka ah ee la isticmaali karo, ama ha ahaado Bilaash ama yaanay ahayn, waa Xorriyadda. Haddii adiga, ama cid kastoo, ii sheegto inaan u baahanahay inaan isticmaalo softiweer bilaash ah iyo qaabab feyl oo bilaash ah (ha ahaato Ogg, WebM, Theora, ODT, iwm) 100%, waxaad iga jareysaa Xoriyadeyda go'aan iyo fikir, taas oo ah dhammaantood, waa kuwa ugu muhiimsan dhammaan xorriyadaha. Waxaan isticmaalaa Software Bilaash ah iyo qaabab bilaash ah markasta oo aan awoodo. Inta badan uruurinta muusigeygu waxay ku jirtaa mp3, marka laga reebo kuwa aan ka jeexjeexo CD ama Jamendo bass, oo ah Ogg; Waxaan ciyaaraa labada ciyaarood ee bilaashka ah (sida Supertux Kart, Open Arena, Battle for Wesnoth, 0 ad) iyo ciyaaro aan bilaash ahayn (oo ku cad qaar ka mid ah qoraaladayda Steam) waxaanan dhagaystaa muusikada bilaashka ah ee laga soo dejiyey Jamendo, iyo sawiradayda waa Nvidia oo leh wadayaasheeda lahaanshaha, taas oo Nouveau, in kasta oo ay sii fiicnaanayaan oo ay sii fiicnaanayaan, haddana waxay leeyihiin wado ay ku maraan. Haddii Intel ay samayn lahayd kaararka garaafyada, ama ay siin lahayd ikhtiyaarrada shirkadaha kale inay iyagu sameeyaan iyagoo adeegsanaya chipset-kooda (sida AMD iyo Nvidia sameeyaan) waan iibsan lahaa haddii aan arko inay leeyihiin awood ku filan. Marka laga reebo sawirada, waxa kaliya ee ubaahan darawalada gaarka loo leeyahay waa tunerkeyga DTT, oo wax yar oo aan isticmaalo (iyo sanado badan kadib wali wuu shaqeynayaa, xitaa HD DTT, oo aan qabtay markii ay tani bilaabatay), way shaqeysaa aniga ahaan
Laga yaabee tan waxaan ku bilaabi doonnaa olol kale, laakiin waxaan u maleynayaa inay ku habboon tahay inaan ku muujiyo aragtideyda aragtideyda oo dhan.
Xilligan la joogo ma haysto wax kale oo aan idhaahdo. Qof kastaa wuu xor u yahay inuu sheego waxa uu doonayo, haddii aanay sidaas ahayn, ma noqon lahayn xorriyad sugan.
Iyadoo la tixgelinayo wareysi:
Ganacsiga bakhaarada wax badan uma tarayo sameeyaha keygen ama ugaarsadeyaasha wax jabsada. Kaliya waxay damaanad qaadeysaa ku tiirsanaan badan oo ku saabsan software noocaas ah, xitaa haddii ay ku dhaartaan inay dambi tahay.
Waxyaabaha kale: Microsoft kuma adka sida Autodesk (abuurayaasha AutoCAD), Adobe (shirkadda waalidka ee Photohop, Illustrator iyo dhowaan Flash) iyo / ama Flexera software (dayactirka hadda ee softiweerka baakadka). profesional ee codsiyada Windows Rakibida), runtuna waxay tahay in ujeedka jilicsanaanta nidaamyada ka shaqeynta saamileyda ay tahay abuurista ku tiirsanaanta iyaga, sidaasna lagu xiro muuqaalka barnaamijyada lahaanshaha (eeg tan threesome de qodobbada con tan lagu daray by maamulka boggaan).
PS-ka maamullada: Haddii faalladani u muuqato Spam darteed, waxaan ku xusuusinayaa inay sabab u tahay xaddiga xiriidhada aan codsaday.
Oo ku dhufo "Taalibaan" iyo jahwareerka farxadda leh ee u dhexeeya "xorriyadda barnaamijyada" iyo "xorriyadda doorashada" ee kala qaybisa bulshada (oo aan lagu xusin jahwareerka "Bilaash / Bilaash").
Waa la fahansan yahay waana wax ka cad in qof kastaa uu xor u yahay adeegsiga softiweerka uu doonayo, inuu ku daabaco maqaallada uu rabo boggiisa, iwm.
Hadda, oo ku saabsan eedeynta "Taalibaan diimeed" ee soo jeedinta ama dhahida inay la jaan qaadi karto mowduuca barta si loo taageero beddelka bilaashka ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, waxaan u maleynayaa inay xad la leedahay cay aan loo baahnayn. Inkasta oo codsiyada bilaashka ah aysan wali ahayn "kuwo layaableh" oo faa'iido ku filan, hadana ma xuma, ama Taliban, ama diin ahaan, in laga fiirsado inaan ka "bulshada" dhiirrigelinno horumarintooda (dhib malahan haddii aan u socono akhri lambarka ama ha akhrin, muhiimaddu waa in la helo suurtagal / xoriyad aan ku sameeyo haddii aan rabo).
Haddii aysan ahayn kuwaas maanta "Daalibaan nacaladda leh" waxaa laygu qasbi lahaa inaan had iyo jeer isticmaalo Daaqaddan "habaarka badan"!
Mudane Doon dijo
Waxaan dhihi karaa waan ku raacsanahay labadaba. Anigu waxaan ahay difaac adag oo xorriyadda doorashada ah, wixii ka sarreeya waxaan necbahay in la ii sheego waxa aan sameyn karo ama aanan sameyn karin sababo falsafad, anshax, siyaasadeed, diineed ...
Ma garanayo sida loogu dhahayo dhinaca kale ee balliga aad joogto, laakiin isku day raqiis ah waxaan u sheegayaa dhammaan kuwa ka soo horjeeda Debian main maxaa yeelay "waxay bixisaa meelo gaar ah oo DIY SIIXD AH (XIDHIIDH LAGA HELI KARO)" in " naar bay galayaan ”. Aniga ahaan ma jiro wax kafiican oo kafiican kan kaliya ee qeybiya 100% softiweer bilaash ah isla markaana awood u siinaya keydka labaad ee wax kasta oo aan aheyn wuxuuna leeyahay maqaallo aad u balaaran oo ku saabsan halista ay wataan qaar ka mid ah codsiyada lahaanshuhu, sida dhageysiga iyo basaasida taariikhda Firefox ee qeybta Skype. Linux, oo OpenSUSE wiki xayeysiiso.
Xorriyadda barnaamijka? had iyo jeer, aniga ahaan xulashada ugu fiican.
Xorriyadda in la rakibo darawallo milkiileyaal ah iyo wixii aad rabto? Sidoo kale marwalba, maxaa yeelay maahan ganacsiga Mr. Stallman ama baaristiisa barakaysan waxa aan ku sameeyo kumbuyuutarkayga.
Jawaab Mr. Doom
@morfeo Ma jiro qof halkan ku eedeeyay qof kale oo adeegsada inuu yahay Taalibaan.
Xafiiska WPS wuu kafiican yahay qashinkaas libreoffice xD marwalba waxaan dhahaa software waa in la hagaajiyaa waxtarkiisa mana siinayo wax shuruud ah inuu xor yahay ama laxirayo !!!
Waa degel ku saabsan Linux (GNU / Linux), softiweer kasta oo loo heli karo waa lagu daabici karaa / ka hadli karaa boggan ... Waa hagaag, aniga ahaan balooggu arrintaas ayuu ku saabsan yahay laakiin ma ahan faahfaahin iyo kazekage inay dheh
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, laakiin waxa ugu xun ayaa ah inaynaan ogeyn haddii dukumiintiyada ay soo saartay WPS ay ku dambeyso gacanta dowladda Shiinaha.
Aan aragno, dowladda Shiinaha waxay kaliya xiiseyneysaa basaasida muwaadiniinteeda iyo wax kale (maxaa yeelay inta soo hartay waxaa gacanta ku haya NSA lafteeda iyo hay'adaha kale ee basaasnimada ee reer Galbeedka). Waan hubiyey markaan isticmaalayo macaamiisha fariimaha degdegga ah ee Tencent QQ.
Jose Sant dijo
Qofna ma garanayaa haddii Waraaqaha WPS ay horey u taageereen sawirada? Waa waxa kaliya ee iga hor joogsada inaan u isticmaali karo si aan caadi ahayn, oo aan kugula taliyo, dabcan.
Jawaab José Sant
Shakhsiyan, waxaan u arkaa inay tahay xafiiska ugu fiican ee beddelka ah ... wax kasta oo ay ku darto ayaa shaqeeya, oo si aad u wanaagsan, iyo wixii aan ahayn, kuma jiraan sheyga; wax libre-openoffice uusan fahmin [liiska rasmiga ah ee shaqooyinka ayaa nuugaya iyo sida loo barbardhigo wax soo saarka ka sarreeya kan iibinta sida ugu wanaagsan: splat], haddii shaqadu ay tahay mid murugo leh ama ay ku badan tahay ixtiraamka xafiiska ms, haddii aan u baahdo, aniga adeegso xafiiska ms oo madaxayga ma ruxayo.
Isla taas. Ribbon wuxuu inbadan inaga ilaaway qaabkii xafiiska 97 waqti hore.
Miyayna jirin cid garwaaqsatay "fursadda" in Ubuntu ay ku taageereyso barnaamijkan, oo aysan ku beddelkeeda bilaash ahayn ?? !!. Waa wax aad u xiiso badan sida shirkaddaasi ugu sharraxdo lahaanshaha ... iyadoo raadineysa inay Ubuntu u rogto nidaam xiran oo xuddun bilaash ah! (ilaa Android) ... Waxay umuuqataa isbedelka shirkadaha ... Ganacsi xumo.
Waxaa jira kuwa dhaha markii "ay bislaato" oo Ubuntu ay rabto inay ku darto asal ahaan, waxay noqonayaan dad furfuran .. laakiin haye, waa inaan aragnaa
Waan ka xumahay Libre-Ofifce; Open-office in kasta oo shaqooyin badan ay ka hayaan, "waxay i siinayaan dareenka" in qofna uusan runtii ka helin haba yaraatee. Sidii oo kale ayaa lagu curyaamiyay waqtiga.
Waxay ku dhowdahay dhammaan walxaha kala geddisan maxaa yeelay way shaqaysaa waana dhammaystiran tahay, laakiin ... Ma garanayo, weligay ma arag qof wata shaadh wata astaanta OpOffice. Waan difaaceynaa (haddii aan sameyno) maxaa yeelay waxay inala joogtay muddo dheer oo ay horeyba uga mid ahayd qoyska Linux, si wanaagsan ... caado ahaan.
Laakiin waxaa jira Alpha oo ka socda Shirkad Shiineys ah oo horeba u ahayd badh Furan.
Waan ka xumahay OffTopic, waxaan rinjiyeeyay Falsafada.
daboolka hoostiisa, shaqooyinka tifaftiraha qoraalka iyo xaashiyaha isbarbar dhiga waxaa loo barbardhigi karaa nidaam xafiis ama 2003, oo ku saabsan 10-11 sano oo dib u dhac ah, had iyo jeer waxay ugu caddeeyaan si doqonimo ah, is-dhexgalka, laakiin sidaas maahan ... xaqiiqda , lotus symhony iyo caligra waxay lahaayeen isdhaafsiyo aad ufiican, kana duwan ribonka, laakiin waxay qaadatay sanado kuwa xorta ah ee furan inay qaataan culeyskooda, waxaan hada arkay isbadalo qaar oo laga soo qaatay ismaandhaafka [oo ka yimid furitaanka oo uu soo saaray ibm oo la iska dhaafay]
Taasi waxay noqon doontaa ra'yi furan Xafiiska furan / Libre-ka oo si weyn u shaqeynaya, feylasha ayaa ka culus oo aanan waligey ka helin wax xafiiska iga maqnaa.
Hadday tahay mid fool xun ama qurux badan, waxay ila tahay wax fiican aniga maxaa yeelay waa wax yar oo adiguna waad fool xun tahay, laakiin ra'yigu waa sida dameerka oo kale, qof walbaa mid buu leeyahay.
Farsamo ahaan marka loo eego, ODT way ka badan tahay OOXML. Si kastaba ha noqotee, waxaan dhibaato ku qabnaa: Latin America waxaan gebi ahaanba ku tiirsan nahay OOXML, nasiib darrose, haddii uusan jirin wax software ah - si kasta oo ay xor u tahay - taasi ma qabanayso heerka Microsoft ee bidixda iyo midigta, nama adeegi doonto. Fahmaan taas.
Waad salaaman tihiin asxaabta DesdeLinux,
Waan ogahay sida loo soo dejiyo oo loo rakibo WPS Office Ubuntu, laakiin waxaan arkay inaad leedahay interface in Spanish. Sidee ku sameysay
Aniga ayaa isku jawaabaya. Waxaa laga yaabaa in qof kale u arko inuu waxtar leeyahay. Waxaad haysaa dhammaan macluumaadka ku jira boostadan: https://blog.desdelinux.net/kingsoft-office-en-espanol-le-mostramos-como-lograrlo/
Ku saabsan rakibidda qaamuuska, waa inaad aadaa cinwaankan (http://wps-community.org/download/dicts/) oo soo dejiso xirmada .zip en_ES. Markaa waan kala bixinaynaa oo nuqul ka galnaa. Marka xigta waa inaan marin u helnaa superuser ama xidid / opt / kingsoft / wps-office / office6 / mui oo halkaa ku dhaji galka ay ku jiraan saxeexa higaada. Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto.
Waa kuwan qoraal kale oo ay sameeyeen wiilashu si ay u helaan tarjumaadda Isbaanishka
Tani waa heerka tarjumaadda Xafiiska WPS:
Halkani ma ololaha ayaa loo qaybiyaa?
Faallada 10 fadlan 😛
Waxaan soo gaarnay goor dambe…. nacalad, kaliya samee saloolka oo way dhammaatay ...
Jawaab Inferat Vladimirvr Vras
Anigu ma ihi hooyo, anigu waxaan ahay reer Brazil, laakiin waxaan ogahay in xeerarka la yiraahdo "waa la go'aamiyay", do verb haver.
Anigu ma ihi hooyo, waxaan ahay reer Brazil, laakiin waxaan ogahay in sharciyada lagu dhaho "waa la go'aamiyay", laga soo bilaabo falka ayaa leh.
Ma isticmaaleysaa Dugsiga Hoose? Sidee u shaqaysaa? Ma ku filan tahay inaad u isticmaasho sida nidaamka ugu muhiimsan, marka loo eego sida aad ilaa hadda u heshay?
Xafiiska WPS wuxuu leeyahay interface garaaf ah oo sifiican ugu habboon bilicsanaanta ay bixiso Elementary OS. Isticmaalayaasha Elementary OS ayaa si caadi ah u isticmaala.
Casharro si loogu waafajiyo Xafiiska WPS iyo Dugsiga Hoose.
Waxaan kugula talinayaa inaad u turjunto Isbaanish sidoo kale:
/_______________________________ //// /______________________________
Faylasha Mircosoft waxay kuu furayaan 99% way kuu fiican yihiin. Haddii aad ku shaqeyneyso feylasha lahaanshaha, waan kugula talinayaa.
Hada ma haysto taageerada ODT, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa Google Doc ama LibreOffice inay la shaqeeyaan qaababkaas.
Waan ka xumahay Mariano waxaan ula jeeday nidaamka qalliinka.
Noocani wali ma taageeraa dukumintiga furan (odt)?
Haddii ay tahay go’aanka shirkadda nasiib darro.
Waxaan rajeynayaa in shirkadda Shiinaha lagu qasbay inay u adeegsato qaabka ODT-da si aan firfircooneyn. Si kale haddii loo dhigo, waa qasab in la isticmaalo maxaa yeelay shirkado badan iyo dowlado badan ayaa adeegsada.
Dowlada leh taageerada ODT: Brazil, Russia, Uruguay, iwm.
Shirkadaha: Google, FireFox, iwm
Nasiib darrose, Peru waxay ku sii socotaa inay ku tiirsanaato Xafiiska mahadnaqa Microsoft (iyo in aan ka hadlay) maqaalkan).
PS: Waxaan hayaa ilaa 3 kiis CD ah inta badan warez iyo freeware (midka kaliya ee bilaashka ah ee aan haysto waa qalabkeyga Debian, Ubuntu, CentOS iyo Slackware discs).
WPS gabi ahaanba waa wax aan faa'iido lahayn maamulka UK maadaama ay dhabarka u jeediyeen qaabab xafiis iyagoo doorbidaya odt.
Tusaale ay tahay in dalal badan ay ku daydaan, hambalyo Ingiriiska.
Mahadsanid Ingiriiska oo aan u dhiibin Microsoft (oo aan la mid ahayn Munich iyo Chile, oo hadda ay hoos-tagayaan Microsoft).
Sida ugu fudud ee lagu furo iyaga dukumiintiyada google oo loogu beddelo qaab kasta oo microsoft ah. Maaha inay adagtahay
Waad salaaman tahay, dhibaatadaydu waxay tahay iyada oo cusboonaysiintii ugu dambaysay aanan u adeegsan karin barta si aan u kala jajabino jajab tobanlaha (kaliya waxay iiga tagaysaa comma). Ma loo qaabeyn karaa si aan u isticmaalo barta? MAHADSANID
Ma laga rakibi karaa terminal-ka?
Markii aan aado badhanka soo dejinta waxay ii tilmaamaysaa bog kale oo ay ku jiraan dhammaan faylasha deynku. Ma waxay tahay inaan soo dejiyo oo dhammaantood rakibo?
Haddii ay tahay inaad isticmaasho barnaamij lagu rakibo xirmooyinka Xafiiska WPS sida Gdebi.
Ma aqaan wado kale oo nasiib daro ah, maxaa yeelay WPS Office wuxuu leeyahay Alpha 15 nooca GNU / Linux.
cunk danny dijo
Sidee fiicantahay in la maro x wps
Ku jawaab erik danny
Nicholas Tassani dijo
Waan haystay noocii hore oo waan iska fogeeyay maxaa yeelay GUI kuma ridi karin afkayga. Hadda markaan arko shaashadan ayaan markale rakibayaa. Waad ku mahadsantahay warbixinta!
Ku jawaab Nicolai Tassani
Waxaan ku rakibay in uu furo 13.1 laakiin wali ma aanan helin wado aan ugu maro Spanishka, waxaan ku arkay ubuntu iyo fedora hadii aad rakibi karto xirmada luqada ...
Mashruucan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo WPS Office Isbaanish. Waxaan kaaga tagayaa isku xidhka.
. Waxaan kaaga tagayaa isku xidhka. Adiga si aad u dhex gasho isbaanishka
Boostada, casharrada rakibidda ayaa la waayey: v
Ku jawaab Joao
Galab wanaagsan, Mariano. WPS 16 alpha 1 mar horaba waa lasii daayay. Aniga oo aan samayn wax kabadan rakibidiisa, waxaan si otomaatig ah ugu rakibaa Isbaanish waana ka dhaqso badan yahay (ugu yaraan pc-kayga) marka loo eego nuqulkan 15.
Markii aan sifiican u ilaaliyo feylasha, markaan rabo inaan keydiyo waxay ii sheegtaa inaysan lahayn qaab u gaar ah, waana digniin xalna kama helin internetka.
Waa maxay dawada aad isticmaasho? Waxaa laygu yeedhay wax badan oo ah isku dheelitirnaan.
Elementary OS waa qaybsi caan ah oo leh hawo Mac OS ah.
Gabriela Cas dijo
Haye, shaki ayaan qabaa.
Waxaan ku rakibey WPS Ubuntu 16.04 markaan furo faylka 'Excel' ee 'Spreadsheets' wuu fureeyaa laakiin si fiican ayaan uhelay dukumiintiga ma garanayo sida loo furo.
Wixii talo ah, jawaab ah, soo jeedin ah?
Jawaab Gabriela Rojo
Xafiiska WPS, maxaa shati ah oo aad ku shaqeysaa markaad shirkad tahay?
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho WPS Office Professional oo ah daabacaadda ganacsiga https://www.wps.com/wps-office-business
Waad isticmaali kartaa shati shaqsiyeed, shirkad, laakiin sharci ma noqon kartaa ????
shirkad ma isticmaali kartaa liisanka shaqsiyeed ee xafiiska wps?
Ku jawaab CRAL